ထောင်ကလွတ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ မိခင်ကြီးနဲ့အတူ စားဝတ်နေရေးအတွက် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုလုပ်ကိုင်းနေတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ အစ္စဏီ(ရုပ်သံ) – Cele Snap
အစ်စဏီက အဆိုတျောကောငျး တဈယောကျပါ။ယခငျကနခေုခြိနျထိ သူရဲ့သီခငျြးတှကေကြျောကွားနဆေဲဖဈပါတယျ။သူရဲ့အမှားတဈခုကွောငျ့ထောငျကွခဲ့ပါတယျ။လတျတလောလေးကမှ ထောငျကလှတျလာတာပါအခုဆိုသူကဘဝကိုအကောငျးဆုံဖွတျသနျးနပေါပွီ။သူအထဲမှာနခေဲ့ရတုနျးက သူ့မိခငျမှာ အမွဲနာကငျြ ဝမျးနညျးနခေဲ့ရတာပါ။
အစ်စဏီကအခုသားအမိနှဈယောကျစီးပှားရေးကိုစတငျလုပျကိုငျဖွဈတဲ့အကွောငျးကိုလဲ ရှငျးပွထားပါသေးတယျ။ “ကြှနျတျောအမေ က ဟငျးခကျြ အရမျးကောငျးတယျ အဲဒီတော့ ကြှနျတျောတို့ သားအမိ ၂ယောကျ စီးပှားရေး လုပျမှာ ဖွဈတော့ မှာမို့လို့ မကွေီးလကျရာ ဆိုပွီး စီးပှားရေး တဈခု ကိုစလုပျ ခဲ့တာ ပါ
ကြှနျတျော အထဲ မှာတုနျးက အမေ ရဲ့ ဟငျးခကျြလကျရာ ကို အရမျးလှမျးတယျ. အမေ ဟငျးခကျြ ပို့တဲ့နဆေို့ ပို့တဲ့ဟငျးတှကေိုတဈနတေ့ညျး ကုနျအောငျစားပဈတာမြိူးရှိတယျပရိသတျတှကေ မကွေီးလကျရာ ကို အားပေးခငျြတယျဆိုရငျ မကွေီးလကျရာ fb မှာ အားပေးနိုငျပါတယျ”ဆိုတဲ့သတငျးကို မြှဝပေေးလိုကျရ ပါတယျနျော။
အစ္စဏီက အဆိုတော်ကောင်း တစ်ယောက်ပါ။ယခင်ကနေခုချိန်ထိ သူရဲ့သီချင်းတွေကကျော်ကြားနေဆဲဖစ်ပါတယ်။သူရဲ့အမှားတစ်ခုကြောင့်ထောင်ကြခဲ့ပါတယ်။လတ်တလောလေးကမှ ထောင်ကလွတ်လာတာပါအခုဆိုသူကဘဝကိုအကောင်းဆုံဖြတ်သန်းနေပါပြီ။သူအထဲမှာနေခဲ့ရတုန်းက သူ့မိခင်မှာ အမြဲနာကျင်ဝမ်းနည်းနေခဲ့ ရတာပါ။
ခုဆိုသူက မိခင်နဲ့အတူအလုပ်ဝေဝိုင်းကူလုပ်ရင်းဘဝကိုဖြတ်သန်းနေပါတယ်။သူက အလှူအတန်းတွေမှာလဲရက်ရောတဲ့စိတ်ရှိကြောင်း Mideaတစ်မှာ “အမှားတစ်ခုလုပ်မိလို့ခုလိုဖြစ်ရပေမယ့် လူထဲကလူပါပဲ အလှူအတန်းတွေလဲတတ်နိုင်သလောက်လုပ်သွားချင်တာပေါ့”ဆိုပြီးပြောထားတာတွေ့ရပါ တယ်
အစ္စဏီကအခုသားအမိနှစ်ယောက်စီးပွားရေးကိုစတင်လုပ်ကိုင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလဲ ရှင်းပြထားပါသေးတယ်။ “ကျွန်တော်အမေ က ဟင်းချက် အရမ်းကောင်းတယ် အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ သားအမိ ၂ယောက် စီးပွားရေး လုပ်မှာ ဖြစ်တော့ မှာမို့လို့ မေကြီးလက်ရာ ဆိုပြီး စီးပွားရေး တစ်ခု ကိုစလုပ် ခဲ့တာ ပါ
ကျွန်တော် အထဲ မှာတုန်းက အမေ ရဲ့ ဟင်းချက်လက်ရာ ကို အရမ်းလွမ်းတယ်. အမေ ဟင်းချက် ပို့တဲ့နေ့ဆို ပို့တဲ့ဟင်းတွေကိုတစ်နေ့တည်း ကုန်အောင်စားပစ်တာမျိူးရှိတယ်ပရိသတ်တွေက မေကြီးလက်ရာ ကို အားပေးချင်တယ်ဆိုရင် မေကြီးလက်ရာ fb မှာ အားပေးနိုင်ပါတယ်”ဆိုတဲ့သတင်းကိုမျှဝေပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
ရုတ်တရက်ဆုံးပါးသွားတဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်ရဲ့ကောင်မလေးအကြောင်းကိုပြောပြရင်း ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတဲ့ ကျော်ကျော်တို့သူငယ်ချင်းတစ်စု